Warbixin: Ka Hor Kulanka Caawa Wax Ka Ogow Guulihii Ugu Waaweynaa Ee Barcelona Ka Gaarto Kooxaha Ka Soo Jeeda Italy – Kooxda.com
Home 2017 April Champions League, Italy, Spain, Wararka Maanta, Warbixino Warbixin: Ka Hor Kulanka Caawa Wax Ka Ogow Guulihii Ugu Waaweynaa Ee Barcelona Ka Gaarto Kooxaha Ka Soo Jeeda Italy
Warbixin: Ka Hor Kulanka Caawa Wax Ka Ogow Guulihii Ugu Waaweynaa Ee Barcelona Ka Gaarto Kooxaha Ka Soo Jeeda Italy
April 19, 2017 · by	Abdi Weli Aadan · 0
Kooxda Barcelona ayaa caawa ciyaari doonta kulan aad u adag oo muhiim ah oo waliba loo baahanyahay in ay samayso soo laabasho cajiib ah kadib markii ay kulankii hore la soo kulantay guuldaro 3/0 ah kala soo kulantay kooxda hogaanka u haysa horyaalka Italy ee Juventus.
Barcelona ayaa taariikhdeeda la soo ciyaartay kooxo badan oo itlay ah iyada oo waliba ka soo gaartay guulo waaweyn iyada oo ay taageerayaasheedu ku rajo weyn yihiin in ay taas oo kale dhacdo kulanka caawa.
Laakiin Kooxda Barcelona ayay shaqo adag u taalaa hadii doonayso in ay samayso ama gaarto guul weyn sidii kulamadii hore ee ay la ciyaartay kooxaha ka socda Italy maadama Juventus leedahay daafaca ugu adag yurub oo dhan.
Hadaba waxa aynu warbixintan ku eegi doonaa kooxihii hore ee Italy ka socday ee ay kooxda Barcelona guulaha waaweyn ka soo gaartay taariikhdeeda.
1.Kooxda Barcelona ayaa guul weyn ka gaartay kooxda Ac Milan sanadkii 1950/1960 kulanka ay wada ciyaarayeen oo ahaa kulanka european cup ah.
Barcelona ayaa laba lugood marka laysku geeyo ku badisay kuna garaacday kooxda 5/1.
2.xilli ciyaareedkii 1967/1965 Barcelona ayaa la ciyaartay kooxda Roma iyada oo aan u aabo yeelin oo ku garaacday natiijo 4/0 ah kulankaas oo isna ahaa Mid european Cup.
3.Kooxda Barcelona ayaa mar kale cadaabtay kooxda Roma xilli ciyaareedkii 2001/2002 sanadkaas oo ay ku kulmeen wareega Group-yada waxana Roma Lagu garaacay 3/0.
4.Xilli ciyaareedkii 2002/2003 kooxda Inter Milan ayaa la ciyaartay kooxda Barcelona kulan ahaa wareega Group-yada champions League Barcelona ayaa 3/0 ku garaacday markii Camp Nou Lagu ciyaaray ka hor inta ayna lugtii 2-aad bar-baro galin.
5.Kooxda Barcelona ayaa kooxda Udinese ku garaacday natiijo 4/0 ah kulan ka tirsanaa champions league xilli ay isaga hor yimaadeen wareega Group-yada sanadkii 2005/2006.
6.Kooxda Ac Milan ayaa Barcelona ku garaacday 2/0 kulan ka tirsanaa wareega 16-ka champions league xilli ciyaareedkii 2012/2013 laakiin Kooxda Barcelona ayaa 4/0 ku xasuuqday una gudubtay wareega 4 dhamaadka.
7.Guusha ugu weyn taariikhda Barcelona ee ay ka gaartay kooxda Italy ayaa aha kulankii ay Barcelona 6/1 ku xasuuqday kooxda Rona sanadkii 2015/2016 kulankaas oo ahaa kii ugu weynaa ee Barcelona ka gaarto kooxaha Italy.
Hadaba Barcelona mar kale masoo celin doontaa taariikhdaas fiican ee ay ku leeedahay kooxaha Italy dhulkana mala dhici doontaa kooxda Juventus?